Yakakurumbira sports blog
Kuvanzika uye makuki mutemo
Nguva yekudzokera kumutambo mushure mekuvhiyiwa gallbladder?
Ndeipi yekutangazve mutambo mushure mekubviswa gallbladder? Kuwedzera kurovedza muviri kana kuita zvemitambo hazvikurudzirwe pamberi pemazuva gumi nemashanu mushure mekuvhiyiwa. Kupora kunofanirwa kunge kuri ...
Maitiro ekutangazve mutambo mushure memakore mashanu?
Maitiro ekutangazve mutambo mushure memakore mashanu ekumira? Kutangwazve kwechiitiko chemitambo kunofanirwa kufambira mberi: zvinodikanwa kutanga nezviitwa zvinyoro (kuchovha bhasikoro, kufamba), nezve…
Nzira yekuti unyoro utange mutambo zvakare?
Nzira yekutangazve mutambo pasina kuzvikuvadza? Kuita sarudzo dzakanaka uye kutangazve kuita zvemitambo chinhu chakanaka. Asi kuenderera mberi ...
Maitiro ekutangazve mutambo mushure memwedzi yekumira?
Nzira yekutangazve mutambo mushure memwedzi? Siyanisa maekisesaizi ako. Kana iwe uchienda kumitambo yekurovedza muviri katatu pasvondo, semuenzaniso,…
Mubvunzo: Sei kudzoka kumutambo kwakaoma?
Ungatanga sei mutambo zvakare? Kutangwazve kwechiitiko chemitambo kunofanirwa kunge kuchifambira mberi: zvinodikanwa kutanga nezviitwa zvinyoro (kuchovha bhasikoro, kufamba), angangoita maawa matatu pa…
Maitiro ekutangazve mutambo mushure memwedzi miviri wabva?
Nzira yekuita sei kupora kwakanaka kwemitambo? Kuti ugadzirise muviri unogona kuita zvidiki zvidiki zvemaminitsi gumi nemashanu zuva rega rega. Kana iwe…
Maitiro ekutangazve mutambo mushure mekuzorora kwenguva refu?
Maitiro ekutangazve mutambo mushure menguva refu yekusaita muviri? Heano mazano gumi ekukutungamira. Zvibvunze mibvunzo yakakodzera usati watanga. … Ita a…
Maitiro ekutangazve mutambo mushure memwedzi 1 wabva? Semuenzaniso, kana iwe uri mutambi wenhabvu, dzivirira kutanga nemutambo (kusimba), ronga mashoma ekudzidzisa…
Nzira yekudzivirira sei marwadzo mushure memutambo?
Sei kwete kuva nemarwadzo mushure memutambo? 7 matipi ekudzivirira aches mushure memutambo Dziya usati wadzidziswa. …Geza mhasuru dzako, usati uye mushure…
Nzira yekumisa sei marwadzo mushure mekurovedza muviri?
Nzira yekudzivirira sei marwadzo mushure memutambo? 7 matipi ekudzivirira aches mushure memutambo Dziya usati wadzidziswa. …Geza tsandanyama dzako, usati…
Ini ndinonzi Alan. Kugamuchirwa kune yangu yemitambo blog. Pano muverengi achawana ichangoburwa nhau dzemitambo, kuongororwa kwemakwikwi, kubvunzurudza kwevatambi, makwikwi epasirese uye eEuropean. Nhabvu, ice hockey, basketball nemamwe makwikwi emitambo.
Mubvunzo unowanzo bvunzwa: Ndiani akakunda parugby?
Nzira yekutora chikamu muChampions League?
Mhinduro yakanakisa: Nzira yekupinda sei munzvimbo yekudzidzira rugby?
Ungave sei mutambi wenhabvu akanaka?
Mubvunzo Unowanzo bvunzwa: Maitiro ekudzokorora mitambo yenhabvu yekare?
Iyo Hockey Playoff Rankings inoshanda sei?
Sei kusakura zvidya paunenge uchitamba mitambo?
Contacts | À propos de nous | Kuvanzika uye makuki mutemo
VAMWE VANE KODZERO VAMWE! Zvese zvinhu zvinoiswa pane ino saiti zvine chekuita neruzivo uye zvekudzidzisa zvinangwa! Kana iwe uchitenda kuti kutumira chero chinhu kutyora kodzero yako, ita shuwa kutibata kuburikidza nefomu rekuonana uye zvinhu zvako zvinobviswa!